May Nyane: 2011
တနေ့တုန်းက FaceBook ပေါ်မှာ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကိစ္စ ပြောထားကြတာလေး ဒီတလောစိတ်ရောက်နေပါတယ်။ ကျမ ပြည်ပရောက်ကာစ.. ဘလော့စရေးတော့ ဘလော့တခုမှာ စာလုံးပေါင်းကိစ္စအချေအတင်ပြောနေကြတာ တွေ့ရဖူးပါတယ်။ တွေ့ပေမဲ့လည်း ကျမက ၀င်ပြောလေ့မရှိတာကြောင့် ဒီတိုင်းနေနေတုန်းမှာ အဲဒီတုန်းက ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးဘလော့ဂါကအစ်မ ၀င်ပြောပါဦး ဆိုတာနဲ့.. ကျမကလည်း အမှန်ကို ဖြစ်စေချင်တာနဲ့... Comment မှာဝင်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ကျမ မှတ်မိ ပါတယ်.. ဒီစာလုံးပေါင်းအမှန်က ဒီလိုပါရှင်...ဒီအဓိပ္ပါယ်မို့ ဒီလိုပေါင်းတာပါရှင်ပေါ့...။ ကျမစိတ်ထဲငါတတ်နိုင်တာလေးဝင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့..။ ဒါပေမဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမရဲ့ Commentအောက်ကနေ ကျမကို သရော်မော်ကားပြောတာတွေ.. ဟားတာတွေ.. ရိတာတွေ.. နောက်ဆုံးကျတော့ အဲဒီ ဘလော့ဂါကောင်လေးကပဲ ဒီလိုရေးလည်းရတာပဲဆိုပြီး တမင်ကို အမှားတွေပေါင်းထားတဲ့ စာလုံးပေါင်းတွေနဲ့ post တခုရေးတဲ့အထိပါပဲ...။ ကျမကတော့ ပြုံးနေလိုက်ပါတော့တယ်။ ကျမက မမှားချင်ဘဲမှားမှန်းမသိဘူးထင်လို့ ပြင်ပေးမိတာကိုး..။ တကယ်က သူတို့က အမှားကို လက်သင့်ခံသူတွေအမှားနဲ့ နေသားကျသူတွေ.. တလွဲမာနနဲ့ နေပျော်သူတွေပဲ...။ ဒါနဲ့ပဲ အဲဒီကတည်းကစလို့ကျမ မြန်မာစာကိစ္စ.. စာလုံးပေါင်းကိစ္စကို မေးလာရင်တောင်မှ နှစ်ကိုယ်ကြားသာ ဖြေပြီးအွန်လိုင်းလောကမှာ နှုတ်ဆိတ်နေလာလိုက်တာ.. ဒီနေ့ထိပဲ ဆိုပါတော့။
ခုတော့ အွန်လိုင်းမှာလည်း နေပါးဝလာပြီ။ အသက်ကြီးလာတော့ အင်း မှန်တာလေးတော့ လုပ်မှဖြစ်မှာ ပါလေလို့လည်း ပိုမိုက်ရဲလာပြီ။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကြီးတော်နွားကျောင်းရတာ တယ်ကုသိုလ်ရတာပဲ လို့လည်း ပိုပိုပြီး ခံစားလာတတ်ပြီ.. ဒါ့ထက်ပိုတဲ့ အခြေနေကတော့ အရေထူတဲ့နေရာမှာ တိုးတက်လာတာ ပါပဲ။ ဆိုတော့ ခုတော့ ကျမ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်လောက်အောင် စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ရတဲ့ သတ်ပုံကိစ္စ ပြောပါတော့မယ်။
တချို့စာလုံးပေါင်းတွေဆို ကျမစိတ်ထဲ ဒီလောက်လေးတော့ မမှားသင့်ဘူးလို့ ထင်မိတာတွေ အများကြီး ပါ။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက မြန်မာစာအဖွဲ့က ပြုစုထားတဲ့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းမှာကို ကျမ သဘော မတူနိုင်တာတွေ အများကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ စာလုံးပေါင်းမမှန်လို့ အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းမသွားရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ဥပမာ... ချွတ်ခြုံကျတာကို ခြွတ်ချုံကျတယ် ပေါင်းလည်း မြင်ရတာသာ တမျိုးကြီးဖြစ်နေတာ အဓိပ္ပါယ် ကတော့ လွဲမသွားဘူးကိုးလို့ စိတ်လျှော့ပေးလို့ ရပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ခြိုးခြံ လား ချိုးချန်လား.. ခြိုးချန် လား ဆိုတာတွေ..။ ထားလိုက်လို့ ရပါတယ်။ ကျမစိတ်ထဲ သိပ်သည်းမခံနိုင်တဲ့အမှားတွေကတော့ မှားမှန်း သိဖို့ ကောင်းလျက်နဲ့ မသိကြတာကို စိတ်ညစ်တာပါပဲ။ အများစုမှားကြတဲ့စကားလုံးတွေ သတိရသလောက် ရေးပြရရင်... ရှေ့စာလုံးပေါင်းတွေက အမှန်တွေပါ.. နောက်စာလုံးတွေက မှားရေးလေ့ရှိတဲ့ စာလုံးတွေနဲ့ မသဲကွဲတတ်တဲ့ စကားလုံးတွေပါ။
ရှုတ်ချ ကို ရှုံ့ချ လို့ ရေးတာ......
ပတ်သက် ကို ပတ်သတ်
တပ်မက် ကို တက်မက်
လုပ်တတ်တာ ကို လုပ်တက်တယ်
သူတို့အချင်းချင်း ကို သူတို့ အခြင်းခြင်း
လုံးချင်းဝတ္ထု ကို လုံးခြင်းဝတ္ထု
မေတ္တာဘွဲ့ ကဗျာ ကို မေတ္တာဖွဲ့ကဗျာ
စွပ်စွဲ တာကို စွပ်ဆွဲ
လွယ်အိတ် ကို လွယ်အိပ်
ရပ်စဲ တာကို ရပ်ဆဲ
အနှောက်အယှက် ကို အနှောင့်အယှက်
ပြန်ချင် တာကို ပြန်ခြင်တာ...
အချေအတင် ကို အခြေအတင်
လုပ်နိုင်ခြေ ဖြစ်နိုင်ခြေ ကို လုပ်နိုင်ချေ ဖြစ်နိုင်ချေ
၀ါသနာ ကို ၀ါတနာ
ဉာဏ် ကို ညာဏ်
ဉာဉ် ကို ညာဉ် …
ဉ လား ဥ လားမကွဲတာတွေ..။ (လုံးချင်းဗျည်းအနေနဲ့ ရေးရင် ဉ .. ပါ။ အသတ်အနေနဲ့ဆိုရင် ဥ ကို ညလေးအနေနဲ့ သုံးပါတယ်)
ရဲဝံ့ လား.. ရဲဝင့်လား...
မုန့်ဖိုး လား.. မုံ့ဘိုး လား...
ဖုန်ထူ လား.. ဖုံထူလား..
ဖြစ်နေကျ အဖြစ်အပျက်လား.. ဖြစ်နေကြ အဖြစ်အပျက်လား..
စုဆောင်း လား.. စုစောင်း လား...
ယောက်ျား လား.. ယောင်္ကျားလား..
သက်သေလား .. သတ်သေလား..
လွင့်စင် လား.. လွင့်စဉ်လား..
အဆင်ပြေ လား.. အစဉ်ပြေ လား..
အသည်းကွဲ လား.. အသဲကွဲ လား...
ချက်ချင်း လား.. ချက်ခြင်း လား
ခမ်းနား လား ခန်းနား လား..
လန်းဆန်း လား.. လန်းဆမ်း လား..
လတ်ဆတ် လား.. လန်းဆတ်လား..
စာအုပ်စင် လား.. စာအုပ်စဉ် လား...
တယောက်တည်းလား.. တယောက်ထဲ လား...
အချိန်မီ လား.. အချိန်မှီ လား..
အလုပ်ဖြစ်ရုံ လား.. အလုပ်ဖြစ်ယုံလား..
အချိန်မီရုံပဲ လား... အချိန်မှီယုံဘဲ လား...
ပြင်းပျ လား.. ပျင်းပျ လား.. ပျင်းပြ လား...
ဖျော်ဖြေ လား.. ဖြော်ဖြေ လား..
ပရိသတ် လား.. ပရိဿတ် လား..
ပြဿနာ လား.. ပြသနာ လား..
ပဟေဠိ လား.. ပဟေဌိ လား..
ပါဠိ လား.. ပါဌိ လား...
ပြောထားလျက်နဲ့ လား.. ပြောထားရက်နဲ့... ပြောထားရဲ့နဲ့လား... …
သိတယ်မို့လား လား.. သိတယ် မဟုတ်လား လား...သိတယ်မှုတ်လား.. လား
နှလုံးသည်းပွတ် လား... နှစ်လုံးသဲပွတ်လား.. (တနေရာမှာဆို နှစ်လုံးသား လို့ ရေးတာတောင် တွေ့ပါတယ်)။
ဒါ facebook နဲ့ blog တချို့မှာ လက်လှမ်းမီတွေ့ရာလေးတွေပဲ ရေးသေးတာပါ။
ပြောရရင်တော့ အများကြီးမှ အများကြီး..
ဖူး ကို ဘယ်မှာ သုံးပြီး ဘူး ကို ဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာ.. ဖက် နဲ့ ဘက်.. ပဲ နဲ့ ဘဲ ... အဲဒါတွေတော့ အပ်ကြောင်းထပ်နေပြီမို့ မပြောတော့ပါဘူး။
ပြောရရင် မြန်မာစာပေါင်းထုံးတွေက သူ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့သူ ချိတ်တွဲထားကြတာချည်းပါ။
အသံထွက်မှားတာတွေကိုတော့ မောရုံမို့ မပြောတော့ပါဘူးလေ..။
ကျမက တမင်တကာ မှားနေကြတယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး.
မသိလို့မှားတယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ တမင်တကာမှားတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ကျမ ခုလိုရေးလည်း သူတို့က ဒါမျိုးတွေ ၀င်ဖတ်တာမှ မဟုတ်တာလေ။
သူမှားနေပါလားလို့ ထောက်ပြတာ လွယ်တယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲလို ထောက်ပြဖို့ကလည်း အမှား ကို အမှားမှန်းတော့ သိဦးမှ မဟုတ်လား နော်..။
မှား အစဉ် ပြင်ခဏ ဆိ်ုပေမဲ့ မှားမှန်းကလည်း သိဦးမှပါလားဆိုတာကိုပေါ့...။
(တချို့စကားလုံးအသုံးတွေက သတ်ပုံကျမ်းမှာတောင် မပါလို့ တချို့ ကျမမှားနေတာ အထောက်အထားနဲ့ အမှန်တွေ့ရင် ၀င်ပြင်ပေးပါဦးနော်)
ဒီတခါ ဆရာမကြီး လုပ်တယ်လို့ အပြောခံရရင်တော့ ပြန်ပြောလိုက်မှာပဲ... ဆရာမကြီးမို့ ဆရာမကြီးလုပ်တာပေါ့လို့ :P
မေငြိမ်း တော်တော် အတင်းအဖျင်းပြော
အမေ့အတင်း အဖေ့ကို ပြော
အဖေနဲ့ အမေအတင်း အဖွားကိုပြော
ရယ်စရာ မောစရာ ချစ်စရာ အတင်းပြော ကာလတွေ။
သူငယ်ချင်းတွေအတင်း ချစ်သူကို ပြော
ချစ်သူအတင်း သူငယ်ချင်းတွေကို ပြော…
သူငယ်ချင်းတွေအတင်း သူငယ်ချင်းတွေကို ပြော..
ပျော်စရာ ရွှင်စရာ အတင်းပြော ကာလတွေ…။
စာရေးဆရာမ မစန္ဒာက ပန်းစကားဝတ္ထုထဲမှာ ပြောတယ်…
“လူတွေဟာ.. ကြီးလာလေ ညစ်နွမ်းလာလေ..” တဲ့။
လာဘ်စားတဲ့ ပါမောက္ခအတင်း ပြော
အဂတိလိုက်စားတဲ့ ဆရာဆရာမတွေအတင်း ပြော..
ကျောင်းသားတွေဆီက ငွေညှစ်တဲ့ မော်ကွန်းထိန်း အတင်းပြော..
လူထုကို နှိပ်ကွပ်တဲ့ အစိုးရအတင်းပြော..
ပြည်သူကို ပြစားတဲ့ လုပ်စားသူတွေအတင်းကို ပြော..
စိတ်ပျက်စရာ ညစ်နွမ်းတဲ့ အတင်းပြော ကာလတွေ…
အတင်းတွေ အညစ်တွေ ဆိုပါစို့။
မတော်မတည့်တာတွေ တွေ့ရင် ရိသဲ့သဲ့ ဟားတတ်တာ…
ဘုရားတရား ရိုသေဆည်းကပ်မှု နည်းပါးတာ…
မထင်ရင်မထင်သလို လူပါးလည်း ၀တတ်သေးတာ...
ယောက်ျားတွေ ပြောတော့ သတင်း
ကောင်းတာ ရွေးပြောတော့ သတင်းတဲ့
မကောင်းတာကို ဝေဖန်ပြောတော့ အတင်းတဲ့…။
အဲလို ရယ်စရာအတင်းတွေ ပြောတော့…
အတင်းအဖျင်း တော်တော် ပြော ဖြစ်ရော..
အတင်း အဖျင်း ဖြစ်ကရောပေါ့…။
မေငြိမ်း တော်တော် အတင်းအဖျင်းပြော…..
ကျမ နံဘေးက သပြေညို…
ငါတို့ စာသင်ကျောင်း… ။
တကယ့်ကိုမှ အားရပါးရ အော်ဟစ်သီဆိုသံလေးတွေ.. ညံလို့နေရော…။ ရပ်ကွက်ထဲက ကျမရဲ့ စာသင်ကျောင်းလေးလေ…။ သပြေညို..တဲ့။ မိဘတွေ ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးမှုနဲ့ ဖြစ်လာရတဲ့ မြန်မာစာကျောင်းလေး။ ကျောင်းသား အယောက် ၄၀ နီးပါးရှိတယ်ဆိုတာ နည်းမှ မနည်းပဲ..။ Maryland နဲ့ Virginia နှစ်ပြည်နယ်က ကလေးတွေ.. တပတ်မှာ တရက် ကျောင်းအားရက် စနေတရက်မှာ တနာရီစာ ခရီးလောက် ကားမောင်းပြီး မြန်မာစာ သင်ရဖိ်ု့ လာကြရတာ…။ မပီကလာပီကလာနဲ့ မင်္ဂလာပါဆရာမ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမ..လို့ နှုတ်ဆက်ကြတဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရရင်.. ကျမ တပတ်လုံး မနားမနေ ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသမျှ အကုန်မေ့ပြီး အမောပြေရပါတယ်။
မောင်တို့မယ်တို့ ကျောင်းခန်းဝင် အပြုံးပန်းကိုဆင်
မင်္ဂလာပါဆရာမ ညီညီညာညာ ရွတ်ဆိုကြ..
ကလေးတွေက မြန်မာစာသင်ရတာကို သိပ်ပျော်ကြပါတယ်။ သူတို့က မြန်မာလို စာတွေ အများကြီး ဖတ်ချင်တာတဲ့။ မြန်မာပြည်အကြောင်း အများကြီး သိချင်တာတဲ့..။ မြန်မာပြည်ကို သွားလည်ရင် အချင်းချင်းစကားပြောနိုင်ချင်တာတဲ့။ အရင်က မြန်မာစကားပြောဖို့ အင်မတန် ခဲယဉ်း ပင်ပန်း ကြတဲ့ ကလေးတွေက.. ခုတော့ သူတို့ သိသလောက်ကို စကားသံဝဲ၀ဲလေးတွေနဲ့ ကြိုးစားပြောလို့…။ သူတို့ဆိုကြတဲ့ ကကြီး ခခွေး ဗျည်းသံ တွေက တစထက်တစ ပီသလာနေပြီ။ သားတို့ သမီးတို့က ဗမာပြည်က တချို့ကလေးတွေထက်တောင် ပီနေပြီ လို့ ကျမပြောရင် သဘောကျ နေကြတယ်။ တသံလျင်းချိတ်.. ထ၀မ်းဘဲ.. ဒရေမှုတ်.. ဖဦးထုပ်.. ဗထက်ချိုင့် လို့ ပီပီသသ ဆိုနိုင်တာလေ..။
သူတို့လေးတွေကို ဗုဒ္ဓ အကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းတွေကို ပုံပြောသလိုပြောပြဖို့.. မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးကို ပါဠိပါဠ်သားနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ဗမာလို အလွယ်တကူ နားလည်အောင် ပြောပြဖို့..။ ဇာတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲ့မကုန်တောင် မဟော်သဓာရဲ့ ဥာဏ်ပညာတွေအကြောင်းလောက်တော့ သူတို့လေးတွေကို သိစေချင်တာပါ။ ပြီးတော့ ကျမတို့ ငယ်ငယ်က နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် စွဲလန်းခဲ့ရတဲ့ ဦးဘကြည်တို့ ကာတွန်းဦးဖေသိန်းတို့ရဲ့ ပုံပမာတို့ ဇာတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ သရုပ်ပြကာတွန်းတွေ ဖတ်တတ်စေချင်တာ..။ ဒီက ကလေးတွေ သိလိုစိတ် ပြင်းပျပုံမျိုးနဲ့ဆို သူတို့ဟာ ဗမာစာဖတ်တတ်တာနဲ့ အတူ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပါ ကျွဲကူးရေပါ သိသွားကြ.. ထဲထဲဝင်ဝင် နားလည်သွားကြမှာ..။ အဲလိုသာဆိုရင် သူတို့ဟာ အမေရိကန်က ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ အသိပညာတွေနဲ့အတူ.. မြန်မာ့ဘာသာရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်ထဲက နေမှုထိုင်မှုတွေကိုပါ သိသွားကြမှာ..။
ကျမတို့ရဲ့ သပြေညို နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျမ မျှော်လင့်ချက်တွေက အဲလောက်ထိ လှပပါတယ်...။
အမေရိကမှာ ဗမာလို တတ်တော့ ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ…. တဲ့..။
ဗမာလို မတတ်တော့ရော ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲ..တဲ့။
ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့ဆိုရင် ကျမတို့တွေ မြင်ရတဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ မမြင်ရတဲ့ တန်ဖိုး ဆိုတာတွေကို နားလည်မှ ဖြစ်မှာပါ။
ကျမတို့ ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အမေရိကန် စာသင်ကျောင်းမှာ ကမ္ဘာကြီးကို သင်ယူနေကြရသလို သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာတွေကိုလည်း သင်နေကြရတယ်..။ ဘာသာစကားဆိုရင်လည်း အနည်းဆုံး ၂မျိုး သင်နေကြရတယ်..။ အထူးသဖြင့်တော့ အမေရိကမှာ အများဆုံး ယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြရတဲ့ Hispanic တွေနဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံနိုင်ဖို့ သူတို့ဘာသာစကား နဲ့ တချို့ကတော့ ပြင်သစ်ဘာသာစကားကို သင်ယူကြ ပါတယ်. (ကျမသမီးက ပြင်သစ်ဘာသာ ယူထားပါတယ်)။ ဒါတွေက ဒီနိုင်ငံမှာ အရှည်နေထိုင်သွားရေးမှာ တော်တော် အထောက်အကူ ပြုမယ့် ဘာသာစကားတွေဆိုပါတော့။ တချို့ကတော့ အပြင်မှာကို တရုတ်ဘာသာစကားသင်နေပါတယ်..။ ဒါလည်း ဟုတ်တာပါပဲ။ တရုတ်ကလည်း အင်အားအကြီးဆုံး ဘာသာစကားတွေထဲက တခုကိုး..။ ဒါတွေက မြင်ရတဲ့ တန်ဖိုးတွေပါ...။
ဒါဖြင့် မြန်မာကလေးတွေ ဘာလို့ မြန်မာစကားသင်ဖို့ လိုသလဲဆိုတာကို စဉ်းစားရအောင်ပါ…။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အရောင်အသွေးမျိုးစုံကို လက်ခံဆက်ဆံတဲ့ နိုင်ငံမို့ ကျမတို့ ၀န်းကျင်မှာ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ပေါင်းစုံ.. ဘာသာစကား ပေါင်းစုံ.. ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ.. ဘာသာရေး ပေါင်းစုံ တွေ့ရပါတယ်။ ထူးခြားတာက ကျမတို့ ဗမာတွေကလွဲရင် ကျန်တဲ့ လူမျိုးတွေရဲ့ ကလေးတွေက သူတို့မိခင်ဘာသာစကားကို မပြောတတ်ဘူးဆိုတာမျိုး လုံးဝ မရှိပါဘူး။ တရုတ်.. မက္ကဆီကန်.. လက်တီနို.. ဗီယက်နမ်.. ကိုရီးယား.. ကမ္ဘောဒီးယား..ထိုင်း.. အီရန်.. အာဖရိကန်.. အိုး... အကုန်လုံးပါပဲ..။ သူတို့ကလေးတွေက အိမ်တွေမှာ သူတို့မိခင် ဘာသာစကား ကိုပဲ ပြောကြပါတယ်။ ကျမတို့ ဗမာမိသားစုတချို့မှာသာ ကလေးတွေ ဗမာလိုမပြောကြတော့တဲ့ ပြဿနာ ရှိနေတာပါ။ ကျမလေ့လာကြည့်တော့ မိဘတွေက ကလေးတွေဆီကနေ အမေရိကန် အင်္ဂလိပ် စကားပြောကို ပြန်လေ့လာယူနေရတာမျိုးမို့ရော.. ကလေးတွေကို ဗမာလို မပြောပြောအောင် လေ့ကျင့်ပေးဖို့ အချိန်မပေးနိုင်လောက်အောင် ဘ၀ထဲ ရုန်းကန်နေကြရလို့ရော ပါပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ.. ကျမစဉ်းစားတာက လူမျိုးတမျိုးဆိုတဲ့ အမှတ်အသားပြယုဂ်ရဲ့ တန်ဖိုး.. နောက်တခုက ဘယ်ဘာသာစကားမဆို တန်ဖိုးရှိတာမို့ ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ ကျင့်ဝတ် နဲ့ ကိုယ့်မိခင်ဘာသာစကားကို တန်ဖိုးထားရမယ့် တာဝန်ဆိုတာတွေနဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာစာဆိုတာ ဖြစ်လာဖို့ ဘယ်လို ခေတ်အဆင့်ဆင့်ကို ဖြတ်ခဲ့ရသလဲ..။ နောက်တခု မြန်မာစာဆိုတာ ခပ်ညံ့ညံ့နုံနဲ့နဲ့ ဆက်သွယ်လို့ ရပြီးရောဆိုတဲ့ ဘာသာစကားမဟုတ်ပါဘူး..။ ပြည့်စုံကုံလုံတဲ့၊ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ စံတန်ဖိုးတွေရှိတဲ့ ဘာသာစကားပါ။ Dead Language မဟုတ်ပါဘူး။ Dying Language လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ living Language ပါ။ ဘ၀သက်တမ်းရဲ့ တ၀က်ကျော်လုံး မြန်မာစာကို သီးသန့် လေ့လာခဲ့ပြီး မြန်မာစာနဲ့ ဘွဲ့သုံးခု ယူခဲ့တဲ့ ကျမဟာ ခုထိ မြန်မာစာရဲ့ တစိတ်တပိုင်းလောက်ကိုတောင် လက်တဆုံး မနှိုက်နိုင်သေးပါဘူး။ မြန်မာစာထဲက အဆင့်အတန်းမြင့်လှတဲ့ စကားသုံးတွေ.. စကားတန်ဆာတွေ.. အဓိပ္ပါယ်တွေကို ထဲထဲဝင်ဝင်သိဖို့ မပြောပါနဲ့ အခြေခံ သဒ္ဒါအထားအသို မှန်အောင် ပြောဖို့တောင် သဒ္ဒါစနစ်ကို ခုထိ မသိသေးတဲ့ ဗမာစစ်တွေတောင် အများကြီးပါ..။ ဒါတွေက မမြင်ရတဲ့ တန်ဖိုးတွေပါ...။ ဒီအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးကြီး အဆင့်မြင့်တဲ့ ဘာသာစကားကို ထိန်းဖို့ တာဝန်.. ကျင့်ဝတ်က ကျမတို့မှာ ပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ ကျမ ယူဆတာပါ။
နောက်တခု မြန်မာစာမဖတ်တော့ ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ လူပြိန်းစကားမျိုးလည်း ရှိပါသေးတယ်..။ ဟုတ်ကဲ့.. စာမဖတ်တော့ ဘာဖြစ်လဲလို့ သဘောထားတယ်ဆိုတဲ့လူနဲ့ သူ့ပတ်ဝန်းကျင် သဟဇာတ မဖြစ်မှုတွေ.. ဘ၀ထဲ အထီးကျန်စိတ်ကျရမှုတွေ.. ဂုဏ်သိက္ခာလျော့ပါးမှုတွေနဲ့ လူ့တန်ဖိုးလျှော့တွက်ခံရမှုတွေကို ကျမတို့အနားမှာကို သာဓကအဖြစ်မြင်နေကြရတာပဲ မဟုတ်လား..။ ဒါဖြင့် ကျမတို့ကလေးတွေကို ကျမတို့ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ ကြီးပြင်းစေမှာပါလဲ...။
တပတ်မှာ ၅ရက် အလုပ်လုပ်… မိသားစု၅ယောက်စာ တာဝန်တွေ.. စနေတနေ့ မနက်ပိုင်းတပိုင်းလုံး ကိုယ့်ပညာရေးအတွက် ကောလိပ်မှာ ကျောင်းတက်..။ ညညတွေမှာ အချိန်မရအရ ပေးပြီး ကျောင်းစာဖတ်ရ..။ ရသစာအုပ်စင် အစီစဉ်အတွက် မဂ္ဂဇင်းတွေ စုံအောင်ဖတ်ရ..။ တပတ်မှာ အားရတဲ့ တရက်မှာ.. တပတ်စာဈေးဝယ်.. အိမ်သန့်ရှင်းရေး.. ။ ကျမမှာ တနေ့ကို ပုံမှန်အိပ်ချိန် ၄နာရီလောက်ပဲ အမြဲရှိပါတယ်.။ တချို့ ရက်တွေမှာ နေ့လယ် ၁နာရီစာလောက် တရေးအိပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလောက် ပင်ပန်းတဲ့ကြားက မြန်မာစာကျောင်းအတွက် စေတနာဆရာမ အလုပ်ကို လုလုပ်တာပါ။ ဆိုတော့.... ကျမ ဘာအတွက် လုပ်တာပါလဲ….။
ကျမတို့ ဗမာကလေးတွေကို... တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိ်တဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြ.. ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ခဲ့ကြရတဲ့ မြန်မာစာပေကို သိစေချင်ပါတယ်။ ငါတို့ဟာလည်း ကိုယ့်မြေ..ကိုယ့်ရေ.. ကိုယ့်စာပေနဲ့ နေနိုင်ခဲ့တဲ့ လူယဉ်ကျေးတွေလို့ သိစေချင်တယ်။ မြန်မာစာပေထဲက မြန်မာဆန်တဲ့ အလှတရားတွေကို ခံစားတတ်စေချင်တယ်။ အဲလိုခံစားတတ်မှ ကိုယ့်ရေမြေ ကိုယ့်တိုင်းပြည်တန်ဖိုးကို သိမယ်။ ကျမတို့ဟာ နိမ့်နိမ့်ပါးပါး အရိုင်းအစိုင်းတွေမို့ သူများတိုင်းပြည်မှာ နေနေရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ တန်ဖိုးကို ကလေးတွေသိမှ သူတပါးက နှိမ်တာ.. စော်ကားတာကို မခံရနိုင်တဲ့ စိတ်အင်အားတွေ ရှိလာမယ်။ ပြီးတော့ တချိန်မှာ သူတို့ပညာစုံတဲ့အခါ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် ပြန်ပြီး အလွယ်တကူ အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်။ တခြားလူမျိုးတွေ ကိုယ့်ထက် သာသွားလို့ ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာ ၀င်လာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့နေရာမှာ ပြည်ပမှာ ပညာသင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ကျမတို့ ကလေးတွေက အစားထိုးဝင်ပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်။ အနည်းဆုံး ကျမတို့နိုင်ငံကို သွားပြီး volunteer အဖြစ် စာသွားသင်ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေဆိုတာက ကျမတို့ ကလေးတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ကြောင့် ပိုပြီး အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်နိုင်ကြပေလိမ့်မယ်..။
ပြောရရင်.. ကျမ ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတော့ ကျမ နိုင်သလောက်… ကျမကို တစိတ်တည်း တ၀မ်းတည်း ၀ိုင်းကူကြတဲ့ မိဘတွေနဲ့အတူ... ၀ိုင်းကူကြတဲ့ ဆရာမလေးတွေနဲ့အတူ... ၀ိုင်းပံ့ပိုးကြတဲ့ ရပ်ဆွေ ရပ်မျိုးတွေနဲ့အတူ ... ကျမတို့ သစ်ပင်လေးတွေ စိုက်နေကြတာပါပဲ…။
ဘာပင်လေးတွေလဲဆိုတာ့ ကျမတို့စိတ်ထဲ အောင်အတိတ် အောင်နိမိတ်ဖြစ်ဖို့ ရည်စူးတဲ့ အောင်သပြေပင်လေးတွေဆိုပါတော့ ရှင်။
ဇန္နဝါရီ ၄ ၁၉၃၈
အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၁။
(သပြေညို ကျောင်းရဲ့ အမှတ်တံဆိပ် Logo လေးကို ပန်းချီ သန်းဌေးမောင်က မေတ္တာနဲ့ ရေးဆွဲပေးပါတယ်)
လှသန်းရဲ့ မုဆိုးမကို လွမ်းလို့ ရေးမိတဲ့စာ
နင် ပခုံးထမ်းခဲ့သလို ငါ မထမ်းနိုင်ခဲ့။
အစ်မ.. ကျမ လှသန်းနဲ့ယူလိုက်ပြီ..တဲ့။
ငါကတော့ လူတော်ထက် လူကောင်းနဲ့ပဲ အတူနေချင်တော့တယ်လို့
ငါတို့ဘ၀ ပျော်ခဲ့ကြရဖူးတယ်နော်... မချော...။
လူ့ဘ၀တွေကို ကဗျာတွေနဲ့ ထုဆစ်
ချစ်တဲ့ မြန်မာပြည်ကို သူ့ဘ၀နဲ့ ထမ်းခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ...
လူ့ဘ၀ထဲ တကယ်တန်အောင် နေသွားခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ...
ကဗျာစား ကဗျာဝတ်စစ်စစ်နဲ့သာ ကဗျာနဲ့ နေသွားခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ...
ကဗျာရေးဖို့ ထမင်းစားခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ...
ကဗျာ့သစ္စာနဲ့ လောကဓံကို ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ...။
ကြက်သီးမွေးမြ ထမတတ် ဖတ်ရတဲ့အခါ..
ငါ နင့်ကို အမြဲလွမ်းတယ်ဆိုတာ...။
လှသန်းကလည်း မုဆိုးမစစ်တမ်းမှာ ပြောပါရဲ့..
သူတို့က ကမ္ဘာ့ဝန်တာကို အနုပညာနဲ့ ထမ်းခဲ့
အဲဒီအနုပညာသမားတွေကို မေတ္တာတရားနဲ့ ထမ်းခဲ့...
ငါ လွမ်းတသသ ဖတ်ရတဲ့အခါ
(ဓာတ်ပုံကို ရသအလင်း Face Book Page က ယူပါတယ်)
Labels: ကဗျာ, လွမ်းဆွတ်ခြင်း
သူတို့ကို အားပေးဖို့ လိုပါတယ်။